पत्रकारहरू पनि गर्छन भ्रष्ट्रचार !
दुर्इचार वर्ष पहिलेको कुरा हो, म्याग्दीमा एउटा यस्तै घटना भयो । नेपालसमाचार पत्रका लागि म्याग्दी संबाददाता ध्रुबसागर शर्माले पुनहिल (म्याग्दीको पर्यटकिय क्षेत्र) को भनेर एउटा तस्बीर पत्रिकामा पठाउनुभएछ । तर छापिएर आएपछि ठूलो हल्ली खल्ली भयो, त्यो तस्बीर त पुनहिलको परेनछ । शर्माले गुगलमा राम्रो फोटो देखेर कम्प्यूटरमा केहि समयपहिले राखेको फोटो पुनहिलको भनेर पठाएछन् । आखिर फोटो परेछ स्वीटजरल्याण्डको ! ल हेर्नुस् त कन्तबिजोग ! एउटा जिल्लाको संबाददाताले कुन ठाउँको फोटो भन्ने कुरा निर्क्यौल नै नगरि ढ्याङ्ग जुन पायो त्यो फोटो पठाउनु हुन्छ त ? ल पठाउनेले त पठाए रे फेरि त्यो पत्रिकामा भएका कला सम्पादकहरूको काम चाँहि के हो कुन्नी ? फोटो आए भयो, जहाँसुकैको होस् पठाउनेले पठाएपछि छाप्नलार्इ के ? आखिर, पत्रिकाको विश्वसनीयता माथि प्रश्न त उठ्यो नी ? हैन र ? जैरे एउटा फोटो नचिन्ने पत्रिकाका मान्छेहरूले समाचार के चिन्लान र ? हैन र ?
एकपटक मैले यहि ब्लगमा उल्लेख गरेको थिएँ, बेनीमा एउटाको नाममा प्रकाशित समाचार पोखरामा अर्कैको नाम दुरूस्तै छापिएको हुन्छ । र, झन अर्काको नाममा त्यो खबर राष्ट्रिय पत्रिकाहरूमा समेत छापिन बेर हुँदैन । हुनसक्छ, धेरैले त्यसदिन मलार्इ हावादारी कुरा लेख्यो शिरीषले पनि भन्नुभयो होला । तर आज ब्लगमा चाँहि म प्रमाणसहित उपस्थित भएको छु ।
नागरिक दैनिकलार्इ बागलुङका संबाददाता दिलीप पौडेल एउटा समाचार नागरिकलार्इ पठाएका रहेछन् । बहुचर्चित म्याग्दीको बाबियाचौर चोरी काण्डको उक्त समाचार खासमा बागलुङ्बाट प्रकाशित हुने मुक्तिक्षेत्र दैनिकका लागि लेखिएको समाचार रहिछ (हजुर आफैले फोटोमा हेरेपछि थाहा लाग्छ) ! तर पौडेलले उक्त समाचारको कार्बन कपि पठाएछन् नागरिकलार्इ । अब यो समाचार हो कि समाचारको भष्ट्रचार ? वा, बसिबसी समाचार बेचेर खाने बानी परेको भन्ने कि ? अल्छी पत्रकार भन्ने ? फलानोले यसो गर्यो, ढिस्कनाले यस्सो गर्यो भनेर लेख्ने पत्रकारहरूले चाँहि आफूले गरेको कामको जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ला कि नपर्ला ? मलार्इ आश्चर्य लागेको छ ! हेर्नुस प्रमाण !